Gudida Ka Soo Kabashada Abaartu Waa Gudida Kobcinta Abaarta… Waayo??? | WAJAALE NEWS
Miyaanay jirin wasaarado ka shaqeeya dhamaan shantan mashruuc ee aad sheegteen, sida:
Wasaaradahani ma aqoontii loo baahnaa ayaanay lahayn sidaa daraadeed ayaa lagu kabay guddidan rayidka ah si ay u taageeraan?
Mise Wasaaradahani daacad ayaanay ka ahayn shaqooyinka kor ku xusan sidaa daraadeed ayaa loogu baahday dad rayid ah oo hawshan qabta?
Haddii aanay daacad ahayn maxaa talaw loogu dhiibay miisaaniyadda qaranka? Miyaanay taasi ahayn ku tagri-fal hantida ummada?
Wasiir Maxamuud Xaashi wuxuu sheegay in haddii tabaabushahan hadda aynu wadno aynu hore u sii samayn lahayn aynu yarayn lahayn khasaaraha inagu dhacay 70% (waa sida uu hadalka u dhigay), talaw markaa yaa xilka hayay abaartan horteed? Markaa miyaan la odhan karin inay xukuumadu masuul ka tahay khasaaraha shacabkeeda ka soo gaadhay abaaraha?
Dhinaca lacagta uu wasiirku sheegay in lagu wareejinaayo dadka rayyidka ah, su’aasha is-waydiinta mudan waxay tahay, waa maxay sababta arrintaasi keentay? Meeday wasaaradda maaliyadda oo iyadu leh shaqaale badan oo u tababaran ururinta lacagta? Maxaa lacagta looga wareejinayaa gacanta dawladda? Dawladdu gacanteedu miyaanuu aamin ahayn?
Ma ogtihiin inaad tihiin guddi sharci darro ah, oo aydaan sharciyadda Somaliland meelnaba kaga jirin?
Qof aqoontiisa sharci hoosayso ayaa odhanaaya oo sawkii maaha madaxweynuhu degreeto nagu magacaabay? Jawaabtiisuna waxay tahay madaxwaynuhu ma laha awoodo aan xuduud lahayn, balse awoodiisu waxay ku xadidan tahay sharciga, sharciguna wuxuu awood u siinayaa maamulida waaxda fulinta ee qaranka si waafaqsan qodobka (81,90) ee Dastuurka JSL, iyadoo amarada iyo go’aamada uu ka soo saarayo xita waaxdiisa fulinta ay ku xadidan yihiin sharciga, siiba Xeerka kala Xadaynta Nidaamka Xukuumadda iyo Hay’adaha Madaxa Bannaan Xeer Lr. 71/2015.
Markaa gudida rayidka ah ee barakaysan ee aqbashay inay qaab sharci darro loo magacaabo waxaan waydiin lahaa talaw hal xaraan ahi nirig xalaal ah ma dhashaa?
Haba la magacaabee, talaw sharci ay ku shaqeeyaan ma leeyihiin? Sharci iyaga laftooda kala xadeeya ma leeyihiin? Sharci ka ilaaliya awoodaha kale ee dawladeed inay shaqadooda soo fara-galiso ma leeyihiin?
Marka arrimahaasi oo dhan laga yimaado, miyaanay gudidan rayidka ah ee barakaysan ogayn in xukuumadani ay tahay ta iyadu dhayalsatay sannadihii badnaa ee ay xilka haysay inay tabaabushe u samayso ummadan oo ka badbaadiya dhibta abaaraha?
Haddii ay gudidu leedahay: hawshani hadda way ka madax-bannaan tahay xukuumada, talaw arrintaasi miyay macquul noqon kartaa?
Talaw gudidu marka ay mashruuca 1aad waddo ee ah daabulista dadwaynaha miyaanay si toos ah u hoos imanayn xukuumada?
Talaw marka ay wadaan mashruuca 3aad ee biyo-qabatinada iyo mashruuca 4aad ee seerayaasha miyaanay u baahnayn cududa iyo awooda xukuumadan?
Markaa xukuumadu miyaanay xukuumadii hore ahayn?
talaw xukuumadu miyay ka toobad keentay dhayalsigii hore?
Shuruudaha tawbada waxa ka mid ah qirashada gafkii kaa dhacay iyo ballan qaadka in aanuu soo noqon mar 2aad, talaw arrintaasi ma samaysay xukuumadu?
Haddii ay xukuumada ka dhab tahay inay guddidani shaqadeeda ku guulaysato, talaw maxay u qaramayn waayeen? Ama sharci ugu samayn waayeen? Amaba ay kharashka wasaaradaha fadhiidka ah uga soo jari waayeen kharashkii ay ku shaqayn lahaayeen guddidani?
Gudida rayidka ah ee barakaysan miyirkooda iyo maankooda ma qabaan marka ay xukuumada Somaliland ay leedahay waxaanu u baahanahay toban Milyan oo doolar oo kaliya oo shanta mashruuc ee kor ku xusan aanu ku fulinayno, talaw xukuumada dhani ma waxay dawaraysaa toban milyan? Ma runbaa gudidan waxa la isugu yeedhay si ay u soo ururiyaan toban Milyan oo qudha? Ma runbaa mise waa dhagahayga?